Wararka Caalamka | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 733
Agaasimihii Maaliyadda W/caafimaadka oo Xiran Maalintii 3’aad Iyadoon Wasaaradu War Ka…
M/weynihii Hore ee Galmudug Xaaf oo La Kulmey M/weyne Axmed Qoor…
Gudoomiyihii Xilka Laga Qaadey ee G/hiiraan Carraale oo Sheegay In Lasoo…
Cali Jayte Gudoomiyaha Cusub ee G/hiiraan oo Sheegay In uu Ka…
Home facebook.com Wararka Caalamka Page 733
Khudbad uu Madaxweynaha Mareykanka, Barack H. Obama u jeediyay shacabka Maraykanka ayuu kusoo bandhigay hannnaanka maamulkiisa ee ku aaddan halista iyo dagaalka lagula jiro kooxda Islaamiga ah ee ISIS ama Daacish. Barack Obama ayaa dadka dalka Maraykanka ku boorriyay inaysan baqdin-galin kooxaha argagixisada ah, kaddib weeraradii ka dhacay magaalada Paris...
Saraakiisha ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah hawl-galka AMISOM ayaa xusay in howlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayku dileen rag ka tirsan xarrakada Al-shabaab. Sarkaal ka tirsan ciidanka Itoobiya ayaa sheegay in howlgalka uu ka danbeeyay weerar Al-shabaab ay ku qaadeen ciidammo ka tirsan kuwa...
Ergeyga Mareykanka ee Somaliya iyo M/weyne Xasan SHeekh oo Muqdisho ku kulmey.
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho kula kulmay wakiilka dowladda Mareykanka ee arrimaha Somalia, David H. Kaeuper, iyagoo kawada hadlay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada waddan. Xasan Sheekh ayaa ergayga Mareykanka ee arrimaha Somalia uga war-bixiyay horumarka laga sameeyay amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada Somalia sannadihii u...
M/weyne Obama oo ku adkeysanaya in mareykanku ku saxsanaa ciidamada loo direy dalka Ciraaq.
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama ayaa si adag u difaacay go’aanka dowladdiisu ay ciidamada gaarka ah ugu dirayso dalka Ciraaq, isagoo sheegay in ciidamadaas ay la dagaallami doonaan kooxda ISIS, balse aysan taasi macnaheedu ahayn in Mareykanka uu mar kale duullaan ku yahay Ciraaq. Barack Obama ayaa hadalkan ku sheegay wareysi...
Hablaha da’da yar isla markaasna inta la guursado hadana laga tago oo qaarada Afrika kusii badanaya.
Magaalooyin ku yaalla Galbeedka Qaaradda Afrika ayaa waxaa ka jira dhaqamo ah in Raggu ay ka tagaan xaasaskooda marka ay guursadaan, iyagoo shaqooyin u raadsadaan dalka Talyaaniga, kama maqnaada tobannaan sanno. Inta badan arrintan waxay ka dhacdaa magaalada Beguedo oo ku taalla Burkina Faso, balse haweenkeeda oo keliya arritan oo...
Stockholm; shir ay soo qaban qaabiyeen ururka caalamiga ah ee socdaalka dunida OIM-MIDA oo ka dhacey dalka Sweden.
Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka Dunida Qaybtiisa horumarinta Afrika (IOM-MIDA) ayaa wuxuu shir muhiim ah ku qabtay xarunta Sweden ee Stockholm. Shirka oo ay qabashadiisa fududaysay Drs. Jihaan ayaa waxaa lagu qabtay hoolka shirarka Kista Träff, waxaana ka qayb-galay aqoon-yahanno badan oo ku nool Sweden, kuwaasoo danaynayay inay wax ka...
Turkiga oo gudaha dalka ciraaq galey iyo dawlada Ciraaqoo ku baaqdey in Turkigu ka baxo waqooyiga dalka Ciraaq.
Xukuumadda Ciraaq ayaa Weydiisatay Turkiga inay ciidamadooda kala baxdo Waqooyi dalkeeda oo ay maamusho ISIS, iyadoo mas’uuliyiinta Ciraaq ay sheegeen in Turkigu uu ogolaasho la’aan soo geliyay ciidamadooda Dalkooda. Warbaahinta Turkiga ayaa baahisay in ugu yaraan 150-askari oo Turkish ah oo 20 illlaa 25 taangi wata ay xukuumadda Turkigu u...
1...732733734...736Page 733 of 736